Zoma, Oktobra 14, 2011 Alarobia, Oktobra 26, 2011 Douglas Karr
Fantatro fa tsy misy ifandraisany amin'ny marketing izany, saingy mpankafy Apple aho ka voatery namoaka ity Steve Jobs Infographic ity. Efa nanoratra ny fanamarihako momba ny eritreritro aho Ny fahafatesan'i Steve Jobs, ary nanao a Zoomerang fanadihadiana izay naneho ny olona dia manantena ny amin'ny ho avin'i Apple.
Ity infographic avy amin'ny World Infographic manome tantara antsipirihany momba an'i Steve Jobs sy Apple. Tena vita tsara!
Navoaka tamin'ny magazine Wired koa ny eBook amin'ny anthology an'i Steve Jobs mivoaka amin'ny iPad, Kindle, ary Nook Color izany.
Argyle Social: Fanarahana ny fiovam-po sy haino aman-jery sosialy
Media sosialy ho an'ny kariera